Ucwaningo lwaseRussia lufakazela ama-GMOs azogxilisa ubuntu ngemuva kwezizukulwane ezi-3 - i-Afrikhepri Fondation
NgeSonto, Septhemba 26, 2021
Ucwaningo lwaseRussia lufakazela ukuthi ama-GMO azovimbela ubuntu emva kwezizukulwane ezi-3
OOmunye ubevele esola ukuthi ukulahleka kwenzalo bekuphakathi komonakalo omkhulu odalekile, amaphuzu okufundwa muva nje akule ndlela. Ucwaningo okuthi, uma lungavaliwe, lube nomthelela omkhulu ezinqumweni ezizokwenziwa ngokuzayo.
Ngo-2009, cishe u-3% womhlaba wezolimo wambozwa ngama-GMO ngamahektha ayizigidi eziyi-134, ngokusho kwe-ISAAA, minyaka yonke, ebika ukutshalwa kwezitshalo eziguquguqukayo emhlabeni. Udaba lokudla kweGMO lungakhula lube lukhuni kungekudala njengoba kuzokwengezwa ingxenye entsha evela eRussia.
Lokhu kuthatha isimo sesifundo, imiphumela yesiteleka kunazo zonke esanda kwethulwa kwabezindaba eRussia njengengxenye yokuvulwa kuleli zwe kweZinsuku Zezokuvikela ezilwa Nezingozi Zemvelo. Kushiwo ngisho noJeffrey Smith, umsunguli we-Institute for Responsible Technology e-United States futhi ongumbhali wezincwadi emhlabeni wama-GMO, ikakhulukazi ngencwadi yakhe ethi Imbewu Yokukhohlisa (ngokwezwi nezwi "imbewu yenkohliso") eyashicilelwa ngo-2003. Senziwe ngokuhlanganyela yiNational Association for Genetic Security kanye ne-Institute of Ecology and Evolution, lolu cwaningo lwaseRussia lwathatha iminyaka emibili, kusetshenziswa amaCampbell hamsters njengezingulube zeginea, uhlobo olunezinga lokuzala. Isitshudeni. Ngakho-ke, uDkt.Alexey Surov nethimba lakhe bondla izilwane ezincelisayo iminyaka emibili futhi ngendlela yakudala, ngaphandle kokuthi ezinye zazo zondliwe kancane nge-GM soya (engeniswa njalo eYurophu ) ukumelana nokubulala ukhula.
Ekuqaleni, kwakhiwa amaqembu amane ababili (abesilisa / abesifazane): eyokuqala yayondliwa ngokudla okungekho soya, okwesibili, ngakolunye uhlangothi, kwakulandela ukudla okubandakanya soya ejwayelekile, owesithathu waphiwa izithasiselo ze-soya ze-GMO futhi ekugcineni iqembu lesine laba namathileyi okudlela lapho isabelo samanyeya ophakeme kakhulu kunalawo esithathu.
Ekupheleni kwalesi sigaba sokuqala, womane amaqembu abenenani eliphelele labangu-140. Ucwaningo luqhubeke esigabeni sesibili ngokukhetha amabhangqa amasha eqenjini ngalinye kulawa okuqala. Futhi, kumqondo wenqubo, amapheya amasha esizukulwane sesibili nawo anezingane, empeleni enza isizukulwane sesithathu nesokugcina sezingulube zeginea. Ngakho-ke, ekugcineni kube khona ukuzalwa kwama-52 phakathi kwezinhlobo zesizukulwane sesithathu ezingazange zidle isoya nhlobo, i-78 phakathi kwalabo abadla isoya ejwayelekile.
Kepha iqembu lesithathu, lelo elondliwe ubhontshisi we-GM, lalinezingane ezingama-40 kuphela, ezingama-25% zazo zafa. Futhi, okubi kakhulu, eqenjini ebelidla ubhontshisi osushintshwe kakhulu zofuzo, munye kuphela owesifazane okwazile ukuzala - abasebasha abayi-16 sebebonke, u-20% wabo ugcine ngokufa.
Ngakho-ke, esizukulwaneni sesithathu, ama-hamsters okuthi, ngezinhloso zocwaningo, abe nengxenye enkulu ye-GMO soy kwimenyu yabo, awabe esakwazi ukuzala kabusha.
Kepha kuphawulwe okunye okumangazayo: amanye ala ma-hamster avela esizukulwaneni sesithathu agcina enezinwele ... emlonyeni, into eyindida kakhulu.
Lapha, ngale ndaba, izithombe ezishicilelwe nguJeffrey Smith, kokuthunyelwe kwakhe. Ngokusho kukaJeffrey Smith, isifundo sikaDkt.Surov nethimba lakhe kungenzeka "sisiphule" imboni eyizigidigidi zamarandi. Icala ngakho-ke kufanele lilandelwe, kepha, kunoma yikuphi, selokhu kwangeniswa ngo-1996 emvelweni nasezinhlakeni zokudla zemikhiqizo yezolimo eguquguqukayo (etholakala embewini efakwa uhlobo olulodwa noma ngaphezulu lwangaphandle ukuze sinikeze isitshalo impahla ethile), izingozi ezihambisana naso zisengaziwa kakhulu ngoba kuncane kakhulu okubonwayo, ngenxa yokuntuleka kwezifundo ezanele nezizimele, kepha futhi ngenxa yokwenqaba kwezinkampani zembewu ukushicilela izifundo zazo ( ngaphandle kwalapho kunenkinga yomthetho) ngenxa yezizathu zamasu ezimboni nezentengiselwano.
Njengoba kumangalisa njengoba kungabonakala, umgomo wokuqapha kule ndawo ubukeka sengathi uyinkohliso, kanti ukungaqiniseki kwesayensi okusele kufanele kukubeka enhliziyweni yenqubo yokuhlola. Ngaphezu kwalokho, singaze sicabange ukuthi lokhu kungabi bikho kokuqapha okubanzi nokungabi bikho kokubonakala komphakathi ngesikhathi esifanayo kulimaza ama-GMO ezolimo okuhlola (isizukulwane sesibili) angenakuhlolwa ku izimo ezingcono ngoba lezo ezisemakethe beziyingxenye ethile kuphela. Ngoba inkinga, ngokuyisisekelo, ukuthi sonke, abathengi, sisekugcineni kwalolu chungechunge lokudla: ngakho-ke ekugcineni emlandweni, zingobani izingulube ze-Guinea?
Impi eyimfihlo ye-GMO
Okusha okungu-11 kusuka ku- € 8,60
Kusetshenziswe okungu-23 kusuka ku-1,49 €
Thenga i- € 9,10
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Septhemba 26, 2021 4: 12 am
Ubuhle obuhle bamapapaya
I-Chemtrails ne-Depopulation: Indlela Yomlando
I-Taitu Betul - I-Comic (PDF)